Somaliland: Go’aamo Kasoo Baxay Gollaha Wasiirrada - #1Araweelo News Network
Hargeysa(ANN)-Gollaha Wasiirrada Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa maanta go’aammo kasoo saaray fadhigii toddobaadlaha ahaa oo ka qabsoomay qasriga Madaxtooyadda.
Fadhigaa oo uu guddoominaayay Madaxweynaha Somaliland, Muuse Bixii Cabdi, waxaa ku weheliyay madaxweyne ku xigeenka Somaliland, Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici), waxaana lagaga hadlay mawaadiic kala duwan oo go’aammo laga soo saaray gunnaanadkii.
go’aammada oo ahaa kuwo muhiim ah oo ku saabsan qaddiyadda madax-bannaanida Somaliland iyo dooddii ay Baarlamaanka dalka UK ay Salaasadii toddobaadkan ka yeesheen madax-bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland.
Fadhiga golaha wasiirrada Jamhuuriyadda Somaliland oo laga soo saaray go’aamo lagu bogaadinayo dooddii xaqiiqda ku fadhiday ee Baarlamaanka UK ka yeesheen qaddiyadda Somaliland, ayaa waxa halkaas ka akhriyey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxana uu golluhu go’aamiyay qodobadan:
> Golluhu wuxuu mahad-naq u diray Baarlamaanka Dalka UK, isaga oo uga mahad-celinaya dooddii ku saabsanayd qaddiyadda Madax-bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland.
> Golluhu waxa uu si gaar ah ugu mahad-naqayaa Xildhibaanadii sida weyn u taageeray in Somaliland xaq u leedahay in la aqoonsado oo uu ugu horreeyo xildhibaan Gavin williamson.
> Golluhu waxa uu mahad-naq u jeediyey Jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan dalka UK oo mar kasta kaalin muhiim ah ka qaata dar-dargelinta qadiyadda Somaliland.
> Golluhu waxa uu baaq u diray dhammaan Jaaliyadaha Somaliland ee ku dhaqan caalamka intiisa kale iyo muwaadiniinta Somaliland ee dalka joogtaba in ay difaacaan qaddiyadda Somaliland iyo hawlaha ictiraaf raadinta ee socda, kuna difaacaan Af iyo qalinba.
> Golluhu wuxuu shacabka reer Somaliland meel kasta oo ay joogaan ugu baaqayaa inay u guntadaan sidii looga midho dhalin lahaa qaddiyadda madax-bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland,
> Goluhu wuxuu ugu baaqay shacabka reer Somaliland ee ku dhaqan dalka dibaddiisa innay samayeen hal Milyan oo saxeex (Petition) oo ay dunidda kaga dalbanayaan xaqooda helitaanka ictiraaf caalami ah oo ay adduunka ka helaan,
> Golluhu waxa uu digniin culus u diray dawladda Muqdisho ee caadaysatay farogelinta qaddiyadda madax-bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland.
“Golluhu wuxuu uga digayaa dawladda Muqdisho oo hadda bilowday weerar qaawan oo ay ku qaadayaan xubnihii Baarlamaanka ee hawshaas galay, waxa aanu u sheegaynaa dawladda Muqdisho ee hawshaas ka talinaya in waxaasi sii kordhinayaan nacayb, kala fogaansho iyo colaad dheeraata oo aad ku beeraysaan Soomaalida gudaheeda, Somaliland-na maaha mid ay cidi ku qasbi karto inay noqoto madax-bannaanideeda iyo masiirkeeda, horena way ugu muujisay naf iyo maalba, haddana waa u diyaar”.
Dhinaca kale gollaha wasiirrada Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu warbiximo ka dhegeystay wasiirrada wasaaradaha arrimaha dibedda iyo iskaashiga caalamiga ah, arrimaha gudaha, waxa kale oo golaha uga warbixiyey xaaladda Abaareed ee dalka madaxweyne-ku-xigeenka Somaliland, ahna guddoomiyaha guddida gurmadka Abaaraha.
Sidoo kale Golluhu waxa uu ansixiyey Siyaasada Qaran ee Maamulka Dhulka oo ay soo wada diyaariyeen xafiiska garyaqaanka guud, Wasaaradda Hawlaha Guud Dhulka iyo Guriyeynta iyo wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada, ujeeddada laga lahaa siyaasadaasina waxay ahayd in la helo hannaan si hufan loogu maamulo dhulka, looguna kala xadeeyo dhul daaqsimeedka iyo dhulka beeraha ah, sidoo kalana lagu habeeyo maamulka iyo qorshaynta dhulka magaalooyinka.